Ịgụ Oge: 8 nkeji Onye ọ bụla maara na PowerPoint bụ asụsụ azụmahịa. Nsogbu bụ, ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri PowerPoint abụghị naanị ihe nkiri slide dị egwu na nke na-agbagwoju anya na-eso ndị na-eme ihe ngosi na-ewebata ụra. Ebe anyị mepụtara ọtụtụ puku nkwupụta, anyị achọpụtala omume kacha mma dị mfe, mana anaghị arụ ọrụ. Iji mezuo nke ahụ, anyị mepụtara Center of Gravity, usoro ọhụụ maka ngosipụta ụlọ. Echiche bụ na oche ọ bụla, slide ọ bụla, na ọdịnaya ọ bụla